तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछ तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको पृष्ठ लोड कसरी चाँडो हुन्छ Martech Zone
हामी आज एउटा परिप्रेक्ष्य ग्राहकसँग भेट्दै थियौं र के प्रभावहरूबारे छलफल गरिरहेका थियौं वेबसाइट लोड गति। इन्टरनेटमा अहिले एकदम लडाई भइरहेको छ:
आगन्तुकहरु धनीको मांग गरिरहेका छन् दृश्य अनुभवहरू - उच्च पिक्सेल रेटिना प्रदर्शनहरूमा पनि। यसले ठूला छविहरू र उच्च रिजोलुसनहरू ड्राइभ गर्दैछ जुन छवि आकार फ्लोट गर्दैछ।
खोज ईन्जिनहरू अल्ट्राको माग गर्दै छन् छिटो पृष्ठहरु कि महान समर्थन पाठ छ। यसको मतलव बहुमूल्य बाइट्स छविमा खर्च भईरहेको छ, छविहरूमा होइन।
खोजी प्राधिकरण द्वारा संचालित भइरहेको छ उल्लेखनीय सामग्री। तपाईंको सामग्री साझेदारी बिना, तपाईं आफ्नो सामग्रीमा ब्याकलिks्कहरू र उद्धरणहरू सिर्जना गर्ने क्षमता सीमित गर्नुहुन्छ ... जैविक खोजी तल ड्राईभ गर्दै।
यो कुनै पनि कम्पनीको लागि सन्तुलन कार्य हो, त्यसैले पृष्ठहरू कसरी लोड हुन्छन् र जहाँ बाटोहरू अवरोधहरू हुन सक्छ भनेर हामी हिँडौं।
पूर्वाधार - आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चरले उच्च गतिको कनेक्टिविटी, सोलिड स्टेट ड्राइभ, र उच्च-स्पीड सीपीयू को रूटि equipment उपकरण, क्लाउड-आधारित वेब सर्भरहरू, र डाटाबेस सर्भरहरू चलाउन फाइबरको उपयोग गर्दछ। अब र टाढा, तपाईंको साइट नयाँ उपकरणमा होस्ट गरिएको नयाँ सुविधामा राम्रो सम्पर्क राख्ने राम्रो परिणाम प्रदान गर्दछ।
डोमेन रिजोलुसन - जब एक पृष्ठ अनुरोध गरीन्छ, डोमेन नाम सर्वर मार्फत समाधान हुन्छ। त्यो अनुरोध लगभग तात्कालिक हो, तर तपाईं जहिले पनि अनुरोध समयको अलि सेभ गर्न सक्नुहुनेछaको प्रयोग गरेर व्यवस्थित DNS सेवा.
डाटाबेस अनुकूलन - एक आधुनिक सामग्री प्रबंधन प्रणालीमा, यो अत्यावश्यक छ कि तपाईंको डाटाबेसले क्वेरी गर्न र समय निकालेको डाटामा प्रतिक्रियाको लागि लिने समय बढाउन अनुकूलित गरिएको छ। तपाईंको वेब सर्वरबाट फरक सर्वरमा डाटाबेस होस्ट गर्नु राम्रो अभ्यास हो तर समान वातावरणमा।
सन्तुलन लोड गर्नुहोस् - टेक्नोलोजी एक सर्वरमा लोड राख्नुको सट्टा ती भरहरू आगन्तुकहरूको लोड साझा गर्न बहु सर्भरहरू तैनात गर्न अवस्थित छ। यस टेक्नोलोजीले तपाईको पोखरीमा सर्वरहरू थप्न जारी राख्नको लागि अवसर प्रदान गर्दछ किनकि माग बढ्दछ ... कहिलेकाँही वास्तविक समयमा।
पृष्ठ अनुरोधहरू - डोमेन पछाडि मार्ग तपाईंको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली वा सामग्री प्राप्त गर्न वाणिज्य प्रणालीमा क्वेरी गर्दछ। तपाईंको डाटाबेस अनुक्रमणिका र हार्डवेयरले सामग्री पुन: प्राप्त गरिको गतिमा असर गर्न सक्छ।
पृष्ठ क्यासिंग - धेरै उच्च प्रदर्शन वेब सर्वरहरू डाटाबेसमा अनुरोध बाइपास गर्न र क्यासबाट सामग्री सेवा प्रदान गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ।
हेडर अनुरोधहरू - पृष्ठको सामग्री भित्र, त्यहाँ स्क्रिप्ट र शैली पानाहरू जस्ता संसाधनहरू हुन्छन् जुन ब्राउजरमा पृष्ठ लोड हुनु अघि अनुरोध गरिएको हुन्छ। धेरै स्रोतहरूले तपाईंको पृष्ठ लोड समय ड्राइभ गर्न सक्दछ।
पृष्ठ तत्वहरू - ब्राउजरले सामान्यतया एकै समयमा एकै सर्भरमा फेरि अनुरोधहरू गर्दछ। यदि त्यहाँ बहुक्षेत्रहरू वा सबडोमेनहरू छन् भने, तत्वहरू एकै साथ अनुरोध गर्न सकिन्छ। केही कम्पनीहरूले स्क्रिप्टहरू, शैली पानाहरू, र मिडियाका लागि ब्राउजरले ती अनुरोधहरूलाई गर्ने तरीकाको लाभ लिनका लागि बहु सबडोमेनहरू तैनात गर्दछ। यदि तपाईं बहु स्क्रिप्टहरू वा स्टाइलशिटहरू लोड गर्दै हुनुहुन्छ भने, फाईलहरूको थोरै संख्यामा तिनीहरूलाई मिलाउँदा प्रदर्शन पनि राम्रो हुनेछ।
सामग्री वितरण नेटवर्क - विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, भूगोलले तपाईंको साइट लोड गर्न लाग्ने समयमा भूमिका खेल्छ। यदि तपाईं आफ्नो सर्वरको नजीक हुनुहुन्छ भने यो छिटो हुन्छ। यदि तपाईं महाद्वीपमा हुनुहुन्छ भने, यो ढिलो छ। A CDN तपाईंको छविहरू क्षेत्रीय रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई तपाईंको श्रोताको लागि चाँडो सेवा दिन सक्नुहुन्छ।
सङ्कुचन वेब सर्वरहरू जुन वेब स्रोतहरूको gzip कम्प्रेसन, छविहरू हुन् संकुचित, स्क्रिप्ट र CSS जुन एक्स्ट्रानस स्पेस हटाउनका लागि परिमार्जित गरिएको हुन्छ सबै वेबसाइट लोड गतिमा नाटकीय सुधार हुन सक्छ।
ढिलो लोड हुँदै - यदि तस्बिरहरू पृष्ठमा तत्त्व देखिने छैन भने किन लोड गर्ने? यदि तपाइँले हाम्रो साइटमा याद गर्नुभयो भने, तपाइँ पृष्ठ तल स्क्रोल गर्दा छविहरू लोड हुन्छन् एक पटकमा उनीहरू एकै पटकमा देखिन मात्र पर्छ। अल्छी लोडिंग तपाईंको वेबसाइट लोड गति धेरै चाँडो गर्न सक्दछ।
होस्ट गरिएका पुस्तकालयहरू - गुगल जस्ता साइटहरूले अब साझा जाभास्क्रिप्ट लाइब्रेरीहरू र फन्टहरूको लागि साझा लाइब्रेरीहरू होस्ट गरिरहेका छन्। किनकि ब्राउजरले यी स्रोतहरू क्यास गर्दछ, यद्यपि आगन्तुक तपाईंको साइटमा पहिलो पटक आइपुगेका छन् - उनीहरूसँग पहिले नै स्थानीय रूपमा होस्ट गरिएको पुस्तकालय क्यास हुन सक्छ।
एसिन्क्रोनस लोड हुँदै - सबै पृष्ठमा तुरून्त लोड गर्नुपर्दैन। तत्वहरू जस्तै सामाजिक साझेदारी बटनहरू, उदाहरणका लागि, अविश्वसनीय ढिलो र एक ब्राउजरमा कर लगाउन सकिन्छ। ट्याग प्रबन्धन सेवाहरू पृष्ठ लोड भएपछि तपाईंलाई ढिलो बनाउनको लागि संसाधनहरू लोड गर्न सहयोग गर्न सक्छ।
मोबाइल अप्टिमाइजेसन - उत्तरदायी डिजाइन हो, ठीक, सबै क्रोध अहिले तपाईंको उपकरणको दृष्यपोर्टको पर्वा बिना सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभवहरू प्रदान गर्न। तर यसले तपाईंको मोबाइल दृश्य सुस्त बनाउन पनि सक्दछ - जहाँ दर्शकहरूको बढ्दो प्रतिशत आउँदैछ।
भिडियो ढाँचाहरू - यदि तपाईं आफ्नो साइटमा भिडियो पृष्ठभूमि समावेश गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई प्रत्येक ब्राउजरको लागि अनुकूलित र संकुचित गरिएको निश्चित गर्नु आवश्यक छ। एक ढिलो लोड भइरहेको भिडियोले साइटको लोड समयलाई तान्न र तपाईंको आगन्तुकहरूलाई निराश पार्न सक्छ।
यहाँ बाट एक नयाँ जारी गरिएको इन्फोग्राफिक हो इन्स्टार्ट तर्क कसरी वेबसाइटहरू बनेका छन् मोटो, र प्रभाव।
टैग: एसिन्क्रोनस लोड हुँदैसङ्कुचनसामग्री वितरण नेटवर्कCSSडोमेन रिजोलुसनgzip सम्पीडनहेडरहेडर अनुरोधहोस्ट गरिएका पुस्तकालयहरूछवि कम्प्रेसनअल्छी लोडिंगलोड ब्यालेन्सिंगलोड गतिलोड समयमोबाइल अनुकूलनपृष्ठ क्याचिंगपृष्ठ तत्वहरूपृष्ठ अनुरोधप्रदर्शनसाइट लोड गतिशैली पानास्टाइलशिटहरूभिडियो कम्प्रेसनभिडियो ढाँचाहरूवेब प्रदर्शनवेबसाइट लोड गतिवेबसाइट लोड समय
अगस्ट 6, 2015 मा 11: 13 AM
मरेका सबै १२ बुँदाहरूसँग सहमत छु।
बढ्दो वेबसाईट ट्राफिकको लागि, म साझेदारी गरिएको होस्टिंगबाट एक VPS वा WordPress होस्टिंगमा सर्न सल्लाह दिन्छु, जबकि माथि सूचीबद्ध गरिएकोमा फलो गर्नुहोस्।